Dhimistii Cashuurta Dahsoon ee Maqaayadaha oo la Dhaleeceeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anders Borg. Sawirle: Lars Krabbe/Scanpix.
Dhimistii Cashuurta Dahsoon ee Maqaayadaha oo la Dhaleeceeyey
La daabacay tisdag 15 maj 2012 kl 09.11
Dhimistii cashuurta dahsoon ee maqaayadaha ayey dhaleeceeyn dusha uga tuureen qubaradu, kuna tilmaameen inay ahayd tallaabo aan waxba ku soo kordhin suuqa shaqada, hase yeeshee koox lagu naasnuujinayey. Dhaleeceeymaha ayaa ka soo yeeray qubarada dhaqaalaha ee hayadda talo-bixinta siyaasadda dhaqaalaha.
Hayaddan talo-bixinta ayay howsheedu tahay inay indhi-indheeyso siyaasadda dhaqaale ee dawladda, halka dhaleeceeynta ay hayaddu dawladda u soo jeedisay tahay mid aad u adag oo dhinacyo badan. Ku tala-galkii dawladda ee tallaabadaasi iyo siday ku abuuri lahayd goobo shaqo ayaa noqday kuwo aad loo buunbuuniyey, sida hayaddau qabto.
Sidoo kale waxay tallaabadaasi albaabada u furi karaysaa cadaadin hor leh ee dawladda kaga timaadda dhinacyo kale ee doonayo sidii looga dhimi lahaa dhankooda cashuurta dahsoon ee adeegyadooda, sida hayadda talo-bixintu sheegtay inay ka welwelsan tahay.
Saameeyn ku leh iyo in kale?
Hase yeeshee wasiirka dhaqaalaha Anders Borg ayaa sheegay inuu qabo in dhimistii cashuurta dahsoon ee maqaayadleyda ay wax ka tartay kaalintii abuurka ee goobaha shaqada, qaasatan marka laga hadlayo xaaladda shaqa-la'aan ee dhallin-yarada.
Halka uu Fredrik Reinfeldt, sidan hadalka u dhigay:
- Waa xilli hore in laga hadlo saameeynta uu falkaasi ku yeeshay suuqa shaqada. Goolkayagu wuxuu ahaa sidii aan u suurta-gelin lahayn dhiiri-gelin shaqa-abuurid goobo ey ka howl-galaan inta badan dhallin-yarada iyo dadyowga asal ahaan ka soo jeeda dalka dibaddiisa.
Tallaabooyin taxadar leh?
Dhanka kale siyaasadda dhaqaale ee Anders Borg ayaa shahaado wanaagsan ku muteeysatay, maadaama uu dhaqaalaha dalkani heer sare kaga jiro marka loo barbar-dhigo kuwa waddammada Yurub. Borg ayaa siyaasadiisa dhaqaale ku saleeysnayd qun-yar socodnimo sannadihii ugu dambeeyey, sida hayadda tala-bixinta siyaasad-dhaqaaluhu qabto. Iyadoona di loo dhigay ama la qaboojiyay qorshihii dawladda ee dhimista cashuuraha mushaarooyinka markii shannaad, welwel laga qabay xaaladda dhaqaale ee Yurub aawadeed.
- Waa muhiimad in saqaf la dhigtaa. Su'aashuse waxay taha saqaf intee le'eg ayaa la dhigayaa haddii ay cirka isku shareerto xaaladda liidata ee dhaqaalaha Yurub, markaa u maleeyn maayo inuu saqaf wax ka tarayo, sida uu sheegay Lars Jonung, gudoomiyaha hayadda talo-bixinta siyaasadda dhaqaale.
Taxadar badan laguma tallaabsan
Reinfeldt ayaanay ula muuqan in dawladdu ku maamushay hab xakameeyn adag siyaasadda dhaqaalaha.
- Taxadarkayagu wuxuu la xiriiraa welwelka ballaaran ee aan ka qabno xaaladda dhaqaale ee caalamka. Waana saansaan aan ka aragnay baahidii alaabada baayc-mushtar ee dalkani dibadda u dhoofiyo oo yaraatay.
Af-hayeenka dhanka dhaqaalaha ee xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga Magdalena Andersson ayaa durbadiiba hakad la'aan u qabsatay tallaabada ay hayaddu ku dhaleeceeysay dawladdu inay dhintay cashuurta dahsoon ee maqaayadaha iyo in dawladdu buunbuunisay faa'iidada tallaabadaa..
- Waa mid aan horay farta ugu fiiqnay. Waana amuur xiisa leh in hayaddu ku tilmaantay falka ay dawladdu cashuurta dahsoon ku dhintay mid naas-nuujin ah.